हिजोसम्म साथमै रहेकी सुस्मिता टाढा हुदा एक्लिए माधब (भिडियो सहित) | Nepalisongskhabar.com
हिजोसम्म साथमै रहेकी सुस्मिता टाढा हुदा एक्लिए माधब (भिडियो सहित)
ईटहरी/ नेपालि संगीत आकाशमा पछिल्लो समय धेरै गीत संगीत सार्बजनिक हुने गरेको छ । जसको सार्बजनिक भिडियो हरुले कति सफलता पाएका छन् त कतिले असफलताको स्वाद चाखेका छन् । यस्तैमा अर्को एक गीतको म्युजिक भिडियो भर्खरै सार्बजनिक भएको छ । गायक बल बहादुर राजबंशीको आवाज रहेको ‘हिजो सम्म’ बोलको गीतको म्युजिक भिडीयो सार्बजनिक भएको हो । हेर्नुस भिडियो यस्तो बनेको छ ।
अष्ट्रेलिया जान नक्कली बिहे गर्नेहरुको कथा ‘कागजपत्र’ (ट्रेलर सहित)
पुजाको हिरो सौगात
अमिताभ बच्चनकी नातिनी कोसँग डेट गरिरहेकी छिन्?
आखिर के छ सनी लियोनीको यो फोटोमा ? एक्कासी ट्वीटरमा एक नम्बरमा ट्रेन्डिङ !